Ọnọdụ Mmekọahụ n'oge Ịtụrụ Ime
Ọ bụrụ na oge ime dị na nwanyị n'emeghị nsogbu, ọ dịghị ihe mere ị ga-eji jụ di na nwunye. Ka ọ dịgodị, n'oge oge echere niile maka nkwụsị ahụ, a ghaghị ilekọta nlekọta pụrụ iche ka ọ ghara imerụ ahụike na ndụ nke nwa e bu n'afọ ma ghara ịkpasu ọdachi dị njọ.
Ọ bụ ya mere eji egbochi ụfọdụ ọnọdụ mmekọahụ maka ndị nne n'ọdịnihu. Ka ọ dị ugbu a, enwerekwa ọganihu maka inwe mmekọahụ mgbe ị dị ime, nke a pụrụ iji mee ihe n'oge dị iche iche na-echere nwa.
Kedu ihe ị nwere ike inwe mmekọahụ na mbido afọ mbụ?
N'ime ọnwa atọ na-atụ anya nwa ahụ maka ndị nne n'ọdịnihu n'enweghị ihe akaebe, e nwere ọtụtụ postures mara maka mmekọrịta chiri anya na onye òtù ọlụlụ. Na oge a, afo na-egbochi ha, kama, enwere nnukwu ohere nke ime ka ụba nke uterine na-abawanye elu, ya mere, a ghaghị iji nlezianya elebara nhọrọ nke ọnọdụ mmekọahụ anya.
Ya mere, na mbido afọ mbụ, ọ dị mma ka ndị inyom dị ime nye ohere maka ihe ndị dị otú a maka inwe mmekọahụ, dị ka:
"Lotus". N'ebe a, nwoke ahụ nọ n'elu ala dị larịị na ụkwụ ya gafere, nwaanyị ahụ nọdata ala ma tụọ ya ụkwụ.
"Ịma Mma Ụra." Nne di n'ihu ga-edina n'elu mbadamba nke mere na obi di ya nma, ma gbue ikpere ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ga-ebuli ụkwụ ya, nke dị n'elu. Nwoke ahụ, n'aka nke ya, aghaghị ịgbata n'agbata ụkwụ nwunye ya ma jiri nwayọ malite ịbanye.
Otu n'ime ihe na-adọrọ adọrọ mmasị maka ndị ime ime n'oge mmekọahụ bụ ọnọdụ "Ịgbagharị ugboro abụọ" . Iji mezuo ya, ndị mmekọ abụọ ahụ ga-edina na azụ ha ma sonye aka, mgbe nwanyi ahụ ga-ejide ụkwụ ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, ndị di na nwunye na-agafe ibe ha, si otú ahụ chọpụta isi nke kọntaktị na imeghe ohere nke nwoke na nwanyị na-amụ nwa.
"Ekekere" na-adabara ma ndị nne na-atụ anya nke na-enwe obere ihe mgbu na ọkara nke afọ na mmalite nke ime ime. Nwa agbọghọ nọ n'ọnọdụ a kwesịrị ịnọdụ ala na oche ma ọ bụ ebe a na-ekpuchi ụkwụ ya, nke dị n'ikpere ya wee banye n'ime akpa nwa ya.
N'ikpeazụ, na mmalite oge, i nwere ike iji ozi ala ọzọ , bụ nke zuru ebe nile n'etiti ndị di na nwunye, n'ụzọ nkịtị.
Olee ọnọdụ nwoke na nwanyị nwere ike ime n'afọ abụọ na nke atọ?
N'ime ọnwa nke abụọ na nke atọ, mkparịta ụka a na-agbanwe agbanwe na mgbanwe nwanyị ahụ n'ozuzu ya nwere ike igbochi iji ụfọdụ ọkwa.
Ka ọ dịgodị, e nwere ihe ndị ọzọ bara uru nke kwesịrị ekwesị maka inwe mmekọahụ na ndị inyom dị ime bụ ndị dị na ụbọchị dị mma, dịka ọmụmaatụ:
Ntughari. N'ebe a, nwoke ahụ dinara n'azụ ya, nne na-eme n'ọdịnihu nọ n'elu wee jiri ụkwụ hichaa ya otu ụkwụ. Ịbanye n'ime ọnọdụ a dị ezigbo mma ma dị nwayọọ, n'ihi ya, ha anaghị eme ka ahụ erughị ala.
"Ụdị ejiji" - ọnọdụ nke ọtụtụ ndị di na nwunye mara. Iji mezuo ya, nwa agbọghọ ga-ewere ọnọdụ ikpere ikpere na gbasaa ikpere ya n'ozuzu. Ụkwụ kwesịrị ịdị ka onye ọ bụla ọzọ. Nna di n'iru ga agha ikpere n'ala wee banye n'ime nwa nwanyi nke n'azu.
Perpendicular. Nwanyị a na-etinye ya n'ụzọ dị mfe, ụkwụ ya. Onye ya na ya na-arụkọ ọrụ, n'akụkụ nke ya, nọ n'akụkụ ya, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ya. N'ịgba ụkwụ ụkwụ, nwoke ahụ malitere ịbanye n'ime ya, mgbe nke ahụ gasịrị, nne na-eme n'ọdịnihu na-agbapụta ụkwụ ya na ụkwụ ya.
Omume Kegel n'oge ime ime
Mmiri oxygen n'oge ime
Ịgba ime nwa - ihe ịrịba ama mbụ
Nyocha maka 2nd trimester
Kedu mgbe afo ga-ada tupu ị mụọ nwa mbụ?
Afọ imeju oyi na nwata
Ọnwa nke asaa nke afọ ime
Enwere m ike ime ime na kvass?
Awara eriri afọ na nwa ebu n'afọ
Mgbe ị ga-edeba aha maka afọ ime?
Ọfụfu ọbara na mmalite ime
Kedu mgbe obi na-amalite ịfụ ụfụ n'oge ime?
Pants maka nwanyi di ime
Nausea n'oge ime
Anya na - ejikọta - ihe kpatara ya
Halloween Caps maka Halloween
Mmekọrịta mgbe a na-amụ nwa
Alakụba nke Dome nke Rock
Pancakes stuffed na obi cheese
Obi na-ewute, ma ọ dịghị kwa ọnwa
Ihe ọṅụṅụ kabeeji dị mma na ihe ọjọọ
Kedu ka esi tufuo isi ísì?
Nyocha maka toxoplasmosis n'afọ ime
Ọnwale ndị na-eto eto
Atụmatụ 30 iji nyere onye nkụzi aka
Mgbu nri ala ala
Ntụziaka maka nnukwu efere - ogwe anụ ọkụkọ
Ncheta nke nnwere onwe
Esi ewepu di nke nwoke?
Otu esi akụ kabeeji n'èzí - ihe nzuzo nke nụ na-eto eto
Kedu agba bụ ntutu na ejiji 2015?
Kedu esi ehichapu ụlọ mposi site na unyi na ichikota ngwa ngwa na oru oma?
Olivier olulu, bọọlụ ọla edo na akwụkwọ ndị ọzọ na-atọ ụtọ Afọ Ọhụrụ